Bogga ugu weyn 40 Xigasho Awood Leh Oo Ku Saabsan Hadafyada Iyo Dejinta Hadafka | 2022
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorka muhiimka ah ka ciyaara guusha qofka waa dejinta yoolalka. Waxaan si dhakhso ah kuugu dhex socon doonaa odhaahyada hadaf-dejinta ee maqaalkan.
Hore ayaan u ogaa inaad taqaan waxa yool yahay, laakiin haddii aadan yeelin, halkan waa kan: Hadaf, sida uu qaamuuska Ingiriisku yahay, waa natiijo uu qofku isku dayayo inuu gaaro. Waa bartilmaameed gaar ah oo loo dejiyay in la gaaro. Tani waxay u ekaan kartaa mid aad u yaab badan, haddaba aan isku dayno inaan aragno dhacdadan.
Waxaad rabtaa inaad hesho boorso birken ah, oo waxaad leedahay qorshe aad ku kaydsato ilahaaga / ilahaaga dakhliga, wakhti cayiman. Waxaad garaacday bartilmaameedkaagii kaydinta, oo waxaad helaysaa bacdii. Xaaladdan, waxaad dejisay hadaf, waadna gaadhay. Boorsada Birken waa hadafka. Kaydintu waa xeeladdaada si aad u hesho hadafka. Tani waa waxa dejinta yoolku tahay.
Waa ficil ah in la sawiro riyo/yool, oo si taxaddar leh loo daba -galo.
Qof kasta oo leh ujeedo ah inuu wax ku gaaro nolosha wuxuu u baahan yahay inuu yeesho ahdaaf, dhinacyo kala duwan. Waxay ku dari karaan mid kasta oo kuwan ka mid ah: cilaaqaadka, qoyska, xirfadda xirfadda, dhaqaalaha, ama dhammaan. Isku -dheelitirnaan habboon dhammaan dhinacyada waa mid aad loogu baahan yahay.
Tusaale ahaan, dabacsanaan weyn ee qof kasta, waa xorriyadda maaliyadeed, gaar ahaan wax kasta oo 'qaangaarnimada' ay tahay inay bixiso. Thanks to Wikipedia, waxaan u haysannaa qeexitaankan xorriyadda maaliyadeed.
“Madaxbannaanida maaliyadeed waa heerka helitaanka dakhli ku filan si uu u bixiyo kharashaadka nolosha qofka inta ka dhiman noloshiisa iyada oo aan loo baahnayn in la shaqaaleeyo ama ku tiirsanaado dadka kale. “In kasta oo tani ay tahay yoolka qof walba, waxay umuuqataa inay tahay mid aan la gaari karin qaarkood. Waxaa suurtogal ah, iyada oo ay ugu wacan tahay la'aanta dhiirrigelinta lagama maarmaanka ah. Ama laga yaabee, tallaabada mararka qaarkood, waa in la dejiyo yool, oo si dhab ah loogu shaqeeyo.
Dhiirrigelintu waxay wax badan samayn kartaa adiga oo kugu dhiirrigeliya inaad tamartaada gudbiso oo aad gaarto xaqiijinta yoolalkaaga. Sida laga soo xigtay Horace Kallen, “Socodku waa yoolka.”
XIDHIIDHKA: Sida Noloshaada Looga Dhigo Mid Xiiso Badan | 17ka Waddo ee Ugu Fiican
Tixraacyadan waxaa la isugu geeyay inay ku dhiirri geliyaan.
1. “Dadka hodanka ah waxay rumaysan yihiin 'aniga ayaa abuura noloshayda.' Dadka saboolka ahi waxay aaminsan yihiin 'Noloshu aniga ayay igu dhacdaa.' ”
2. Qayb weyn oo ka mid ah xorriyadda maaliyadeed waa in qalbigaaga iyo maankaagu ka xor yahay walwal ku saabsan waxa noloshu noqon doonto. ”
3. "Raacitaanka xiisahaagu waa mid dhammaystiran oo horseedaya xorriyad maaliyadeed." - Robert G. Allen
4. “Xawaaraha guushaadu waxay ku kooban tahay oo keliya ku -hayntaada iyo waxa aad diyaar u tahay inaad hurto.” - Nathan W. Morris
5. “Ha ii sheegin waxaad qiimayso, i tus miisaaniyaddaada, aniguna waxaan kuu sheegayaa waxaad qiimeyso.” - Joe Biden
6. “Haddii aadan wax hiigsanayn, mar walba waad garaaci doontaa.” - Isha aan la aqoon
7. “Waa muhiim inaad dejiso hadafyadaada oo aad u shaqeyso si aad u gaarto.” - Yuichiro Miura
8. “Khatarta ugu weyn ee inteenna badan ma aha in ujeeddadeennu ay aad u sarreyso oo aan seegno, laakiin inay aad u hooseyso oo aan gaarno.” - Michelangelo
9. “Dhibaatada haysata hadaf la’aanta ayaa ah inaad noloshaada ku qaadan karto kor iyo hoosba garoonka oo aadan waligaa dhalin.” - Bill Copeland
10. “Maqnaanshaha yoolal si cad loo qeexay, waxaan si qariib ah daacad ugu noqonnaa fulinta ficillada maalinlaha ah.” - Qoraa aan la aqoon
11. “Dejinta hadafyadu waa tallaabada ugu horreysa ee wax aan la arki karin loo rogo mid muuqda.” - Tony Robbins.
12. “Haddii aad rabto inaad faraxdo, dejiso yool ku amraya fikradahaaga, xoreeya tamartaada oo dhiirrigeliya rajooyinkaaga.” - Andrew Carnegie
13. “Hadafyadu waa shidaalka ku jira foornada guusha.” - Brian Tracy
14. “Haddii hadafku mudan yahay in la yeesho, waxaa mudan in la xiro waqtiga noloshaada maalinlaha ah ee lagama maarmaanka u ah in la gaaro.”- Jill Koenig
15. “Hadafyada dhexdooda waxaa ka mid ah wax la yiraahdo nolol, waa in la noolaadaa oo lagu raaxeystaa.” - Sid Kaysar
16. “Riyadu waxay noqotaa yool marka ficil loo qaado gaaritaankeeda.” - Bo Bennett
17. “Riyadu ma shaqaynayso haddaadan samayn.” - Unknown
18. “Ogaanshuhu kuma filna; waa inaan codsanaa. Doonistu kuma filna; waa inaan yeelnaa. ” - Johann Wolfgang v Goethe
19. “Fikrado badan oo waawayn ayaa aan la baadhi karin, qaar badan oo ka mid ah kuwa wax fuliyana waa fikrado la’aan. Mid aan midna lahayn waa mid aan qiimo lahayn. ” - Tim Blixseth
20. “Waxa aad ku hesho hadafyadaada ma aha kuwo muhiim u ah waxa aad noqotid adoo gaadhaya yoolalkaaga.” - Henry David Thoreau
21. “Qeybba mar, maalinba maalin, waxaan fulin karnaa hadaf kasta oo aan nafteena u dejinay.” - Karen Casey
22. Andy Andrews
23. “Haddii qorshuhu shaqayn waayo, beddel qorshaha, laakiin ha noqon yoolka.” - Unknown
25. "Qaansoole wanaagsan lama garto fallaadhihiisa ee waa ujeeddadiisa." - Thomas Fuller
26. oo ujeeddadiisu tahay dhex -dhexaadnimadu aad bay uga yaraan doontaa. ” - Oraahda Burma
27. “Ka fikir hadafyo yar oo filo guulo yar. Ka fikir hadafyo waaweyn oo guulo waaweyn ku guulayso. ” - David Joseph Schwartz
28. Wayne Chirisa
29. “Kuma filna tallaabooyinka laga yaabo inay mar uun horseedaan yool; talaabo kasta waa inay ahaataa hadaf iyo talaabo sidaas oo kale ah. ” - Johann Wolfgang v Goethe
30. Habeenka Hablaha
31. - Og Mandino
33. - Scott Reed
34. - Tony Robbins
35. Inaad ku dul fadhiisato fikrad ama ku guuldareysato inaad ku dhaqaaqdo hadaf run ahaantii maahan hadaf-dejin, laakiin waa fikirka rabitaanka- Browns
35. Dejinta hadafyada waxay kuu oggolaaneysaa inaad sawirto aragti ah waxa aad rabto mustaqbalkaagu inuu noqdo-Catherine
36. Hadafyadu waa khiyaali saafi ah haddii aadan lahayn qorshe gaar ah oo aad ku gaarto. ” - Stephen Covey
37. - Stephen Kellogg
38. "Hadafku waa riyo leh waqti kama dambeys ah." - Napoleon Hill
39. Ma jirto waddo kale oo loo maro guusha. ” - Pablo Picasso
40. Marka ninku uusan garanayn dekadda uu samaynayo, dabayshu ma aha dabaysha saxda ah. ” - Seneca
41. David Allen
Xigashooyinkani waxa kaliya oo ay ku gelin karaan meel aad kaga warami karto xaaladaada hadda, iyo halka aad rabto in aad joogto. Doorashada aad ku dabaqi karto safarkaaga guusha waa waxa u horseedi doona guushaada. Waa caadi inaad nasato, laakiin ha ku fashilmin inaad soo noqoto. Soo noqoshada iyo joogtaynta ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Markaa, halkan waa laba doorasho oo waaweyn. Waxaad heshay tan!
41 Xigasho Cusub oo Ku Saabsan Hoggaaminta iyo Dadka Hoggaaminaya 2022 -ka
Xigashooyinka Xorriyadda Maaliyadeed ee 50 Si aad u dhiirrigeliso Yoolalkaaga Lacagta ee Philipe Borges
50 Xigasho Ku Saabsan Yeelashada Hadafyada Si Loo Dhiirigeliyo Oo Loo Waxyoodo
Xigashooyinka Hadafyada: 65 Xigashooyin dhiirigelin leh oo ku saabsan dejinta yoolalka Waxaa qoray Dr. Nikki Martinez
Dhibcaha credit waa heshiis weyn marka la codsanayo amaah guri ama mortgage. Dhab ahaantii, ma...
Ma u fiirsatay goobta madadaalada horumarka la taaban karo ee sanadihii u dambeeyay?! Isticmaalayaasha ayaa sii yaraanaya u janjeerta dhanka telefishinka,…
Waa imisa Qiimaha Xarunta Xogta
Qiimaha Xarunta Xogta waxa loola jeedaa qiimaha lahaanshaha ee socodsiinta xarunta xogta gaarka ah ama goobta midabaynta…